I-LG G5, le yimodyuli yayo enamandla yokuphucula umsindo | I-Androidsis
I-LG isothusile ngexesha lokuboniswa kwe LG G5. Ngelixa kuyinyani ukuba uninzi lweempawu zayo zobuchwephesha yayiyimfihlo evulekileyo, umenzi waseKorea wayenothuselo asigcinele lona: the Iimodyuli ezinokuqhotyoshelwa kwi-LG G5.
Kwaye kukuba i-LG isothusile ngokubonisa imodyuli ye-smartphone ethi, ngaphandle kokuba ibe yifowuni yohlobo lweProjekthi, isinike uluhlu olunomdla kakhulu olunokwenzeka. Kwaye namhlanje sikubonisa kwividiyo enamandla Imodyuli yokuphucula umsindo we-LG G5.
I-LG Hi-Fi Plus kunye ne-B & O Play, nantsi indlela esebenza ngayo imodyuli ye-LG G5
Umntu ophetheyo ukusibonisa ukuba le modyuli yeaudio yeyiphi imisebenzi ye-LG G5 UJairo Piñeiro, Umphathi weNgingqi ye-LG, njengoko ubonile kwividiyo, isibonisa zonke iimfihlelo ze I-LG Hi-Fi Plus kunye neB & O Play.
Kwaye kungenxa yokuba eli gama linzima kukho imodyuli enomdla ngokwenene ye-LG G5. I-LG Hi-Fi Plus enemodyuli ye-B & O yokudlala, enabela emazantsi efowuni, inyusa ubungakanani bayo kancinci kwaye ithathe indawo yokugqitywa kwe-matte kunye ne-metallic ngombala omnyama kwiyunithi, inikeza umgangatho ophezulu wezandi.
Khankanya ukuba le modyuli usasebenzisa izibuko lohlobo C lwe-USB esemgangathweni, ukongeza kwimveliso yesithethi kunye ne-headphone entsha ye-3.5 ebandakanya isiguquli sedigital.
Le yunithi 32 bit DAC, Iphuhliswe yinkampani yaseDenmark iBang & Olufsen, ixhasa ukusasazwa ngokuthe ngqo kwidijithali kwiifayile zomsindo ezinesisombululo esiphakamileyo kwaye iphucula umgangatho wayo nayiphi na iaudiyo engama-24 ukuya kuma-32-bit. Kucacile ukuxelela umahluko kufuneka usebenzise ii-headphone ezikumgangatho ophezulu, kodwa iimvavanyo zethu zokuqala kwibhokisi ye-LG zazingaphezulu kokunelisayo.
Inkcukacha enomdla kakhulu iza nenyani yokuba i-LG ayifuni ukwenza imodyuli yayo yeaudio kuphela kwi-LG G5. Ukuba sifuna, sinokudibanisa i-LG Hi-Fi Plus kunye nemodyuli ye-B & O Play kuyo nayiphi na iMac Os X, i-iPhone, i-iPad kunye nesixhobo se-Android ngokucacileyo.
Sele siyithandile imbono yeemodyuli, indlela eyahlukileyo yokuzihlaziya kunye nokwahlulahlula okhuphisana nabo. Kwaye inyani yokuba i-LG ayikhawulelanga kwimodyuli yayo yeaudio kwi-LG G5, ukuyivumela ukuba incamathele kuyo nayiphi na ifowuni yenza ukuba oku kufumanekayo kube yinto enomdla ngokwenene.
Kwaye kuwe, ucinga ntoni ngemodyuli ye-LG G5 yeaudio?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » LG » I-LG G5, le yimodyuli yayo enamandla yokuphucula umsindo
Ongaziwayo waseVenice sitsho
Ngemodyuli, ifowuni ayingeni kwizigubungelo zayo eziqhelekileyo ngelixa unayo ayizukukhuselwa
Phendula kwiVenetian engaziwayo